Wadanka Iiraan oo 4000 oo askari u diraya wadanka Suuriya | Salaan Media
Home Wararka Wadanka Iiraan oo 4000 oo askari u diraya wadanka Suuriya
Wadanka Iiraan oo 4000 oo askari u diraya wadanka Suuriya
Wadanka Iiraan ayaa shaaciyey in uu u dirayo Dalka Suuriya 4000 oo askari kuwa ka tirsan Xarasal Jamhuuriga wadankaas Iiraan. Waa sida uu wargeyska ka soo baxa wadanka Britain ee The Independent uu sheegaay. Waxaanu ku daraay wargeysku isagoo ilo xog leh oo ku dhow maamulka Iiraan xigsanaya in uu qaraarka ah in la tageero Bashar Al Assad ay qaadatay Iiraan ka hor intaanay doorashada Madaxweynaha dalkaasi aanay dhicin.
Dhanka kalena wuxuu shaaciyey Madaxweynaha wadanka Masar Maxamed Morsi in uu cilaaqaatka ka goostay mamulka Bashar Al Assad, isagoo ku daray in uu khadka telefoonka kala xidhiidhay Madax ka tirsan caalamka Islaamka iyo kuwa kale oo caalamka ka tirsan oo uu kala hadlay sidii loo gargaarilahaa shacabka reer Suuriya.
Mandiqada ay ku taalo Suuriya ayaa ah mid taarikhiyan iyo istraatigiyan ba aad uu muhuum ah iyadoo imika dagaalka isu badalay mid u dhexeeya dadka Ehelu Sunnah ah iyo dadka madahbka shiiciga ah taabacan, markii ay cadaysatay Jabhada Xisbul ALLAH ee ka dhaqdhaqaaqa wadanka Lubnaan in ay faranta dagaalka ku taageerto Bashar Al Assad.
Dagaalka ka socday wadankaasi Suuriya ayaa la qiyaasay in ugu yaraan ilaa 93,000 oo qof ku dhinteen iyo ilaa malyuun iyo badhina ku barakaceen.